ISan Pedro de Alcántara, umcebo eCosta del Sol | Ukuhamba kwe-Absolut
ISan Pedro de Alcantara
Ukuhamba kwe-Absolut | | España
Etholakala eduze kakhulu neMarbella yomhlaba wonke, iSan Pedro de Alcántara imele okuphambene, okusho ukuthi, ukuthula kwedolobha elijwayelekile laseSpain. Isisekelo saso sisanda kwedlula, ngoba yazalwa njengekoloni lezolimo ezandleni zeMarquis del Duero e1860, ingesinye sezikhathi eziphambili kakhulu.
Njengamanje, idolobha laseMalaga ligqame ngezindlu zalo zabamhlophe nokuba nazo zonke izinsiza ezijwayelekile kubantu abangaphezu kwezinkulungwane ezingamashumi amathathu nanhlanu. Kodwa-ke, yize yasungulwa eminyakeni eyikhulu namashumi amahlanu edlule, ikunikeza izikhumbuzo ezithakazelisa kakhulu nezindawo ezinhle kakhulu zokujabulela imvelo.
1 Yini ongayibona eSan Pedro de Alcántara
1.1 I-Paleo-Christian basilica yaseVega del Mar
1.2 Amabhati amaRoma aseLas Bóvedas
1.3 ISonto LaseSan Pedro de Alcántara
1.4 I-Villa yaseSan Luis
1.5 I-Trapiche de Guadaiza
2 Izinto okufanele uzenze eSan Pedro de Alcántara
3 Isimo sezulu eSan Pedro de Alcántara
4 Ongakudla eSan Pedro de Alcántara
Yini ongayibona eSan Pedro de Alcántara
Abantu baseMalaga banezindawo eziningi okufanele uzivakashele, kusuka izinsalela zemivubukulo i-paleochristian ne-roman ezakhiweni eziyingxenye ye- ifa lezokwakha lezimboni. Futhi nezinye izikhumbuzo ezithakazelisa kakhulu.
I-Paleo-Christian basilica yaseVega del Mar
Uzothola lezi zinsalela emlonyeni woMfula iGuadalmina, endaweni lapho kudlula khona umgwaqo i-Roman Herculean, oxhuma Cádiz futhi Cartagena. Njengamanje, icebo lesonto ligcineke ngokulambisa, likhombisa umzimba wezintaba ezintathu nama-apse amabili aphikisanayo. Yakhiwa phakathi kwekhulu lesi-XNUMX nelesi-XNUMX ngemuva kukaKristu futhi kulindeleke ukuthi ibe yingxenye yedolobha lase UCilniana, nobukhona bakhe, kepha, abukho ubufakazi.
Kwakukhona necropolis lapho. Ngakolunye uhlangothi, lonke ifa elatholwa kanye nalezi zinsalela (amatshe amathuna, imikhumbi, amagugu kanye nezimpahla zamathuna) likwiNational Archaeological Museum yaseMadrid. Isonto kuyinto Isikhumbuzo somlando kusuka ku-1931.
Amabhati amaRoma aseLas Bóvedas
Ungasizakala ngokuwavakashela lapho uya esontweni, ngoba ngamamitha angamakhulu amahlanu nje ukusuka lapho. Kuyisakhiwo esilinganayo, esinamakamelo ayisishiyagalombili azungeze igumbi eliphakathi, futhi sinesikhathi esiphakathi kwekhulu lesi-XNUMX nelesi-XNUMX ngemuva kukaKristu.
Yakhiwe ngokhonkolo oqinile ngakho-ke imelane nokuhlolwa kwesikhathi kahle. Ngaphezu kwalokho, inesici esikhethekile sokuthi uphahla lwayo lubekiwe. Kusukela ngo-1936 kube yiSikhumbuzo Sikazwelonke futhi kusukela ngo-2007 Impahla Yezintshisekelo Zamasiko.
Ngakolunye uhlangothi, eduze neziphethu ezishisayo uzothola i- beacon umbhoshongo Eyakhelwe ngekhulu le-XNUMX njengengxenye yemilindo yokubuka eyayilawula ukufika kwezigebengu ezivela eNyakatho Afrika ngasogwini. Ukuphakama kwayo kungamamitha ayishumi nantathu futhi isisekelo sayo sinobubanzi obuyisishiyagalombili.
ISonto LaseSan Pedro de Alcántara
Ivula ngo-1869, iyaphendula isitayela sobukoloni futhi inesakhiwo esinqenelekayo esinombhoshongo omise okwe-prism okhumbuza iPortichuelo de Antequera. Inepulani ye-basilica futhi ingesinye sezakhiwo ezimbalwa ezisele ezivela kwikoloni lokuqala lezolimo elenze inani labantu abakhona njengamanje.
I-Villa yaseSan Luis
Ukwakhiwa kwayo kusuka ngonyaka we-1887 njengekhaya lomndeni wakwaCuadra Raoul, owathola ubunikazi baleli koloni ngo-1874. Iyathakazelisa ngoba ayihlangene ngalutho nesitayela sase-Andalusia. Esikhundleni salokho, iyaphendula Frances yalesosikhathi. Inepulani phansi elingunxande nokuphakama okuthathu. Uphahla lusikiwe kanti ngaphansi kwalo kunabahlali abathathu abahlanzekile. Lesi sakhiwo uzosithola kalula njengoba manje sekuyisihlalo seHhovisi leMeya.
I-Trapiche de Guadaiza
Ngaphandle kwezinsalela zemivubukulo esikuchazele zona, kungenzeka ukuthi lesi yisakhiwo esidala kunazo zonke eSan Pedro de Alcántara, ngoba sakhiwa ngaphambi kokusungulwa kwekoloni. Ngokuqondile, kusuka ku-1823 futhi umsebenzi wayo bekuwukwenza ushukela. Kodwa-ke, kamuva yanikezelwa ku- imodeli yasepulazini, isikole sabaphathi bezolimo esasiyiphayona kulo lonke elaseSpain.
Kufanele kuthiwe kule ndawo kulinyiwe ushukela amakhulu eminyaka kusukela ingenye yezindawo ezimbalwa eYurophu lapho kunezimo ezifanele zokuthi lesi sitshalo sikhule. Namuhla uzothola kulesi sakhiwo isikhungo samasiko.
Njengoba ushukela wawuningi kule ndawo, leli koloni lasungula le distillery ngo-1871. Eqinisweni, lenza ugologo ngohlobo lwe-molasses. Lesi sakhiwo siqukethe inkaba engunxande nombhoshongo omude. Kepha, ngaphezu kwakho konke, its isicabha, ihlotshiswe ngomngcele ngamathayili amhlophe naluhlaza okwesibhakabhaka kanye nezinye izinto zokukhulula.
Izinto okufanele uzenze eSan Pedro de Alcántara
Idolobha laseMalaga linobuhle i-playa lapho ungajabulela khona ilanga nolwandle. Ngokufanayo, kukhona ifayela le- ukuhambahamba icishe ibe ngamakhilomitha amane ubude exhuma nePuerto Banús nalapho uzothola khona imigoqo nezindawo zokudlela eziningi ezinemifanekiso eminingi.
Kepha, uma uthanda ukuhamba, ungakwenza futhi ngaseBoulevard noma ngeParque de los Tres Jardines. Futhi ngaphezu kwakho konke, unayo imizila yokuhamba izintaba eSierra Blanca. Isibonelo, leyo ekhuphukela eCruz de Juanar, ecishe ibe ngamamitha ayi-XNUMX ukuphakama, naleyo ekhuphukela esiqongweni seLa Concha.
Isimo sezulu eSan Pedro de Alcántara
Kokubili idolobha nayo yonke indawo yaseMarbella bane- Isimo sezulu saseMedithera esishisayo, ebusika obumnene kakhulu nangehlobo elishisayo. Imvula incane kakhulu futhi izinga lokushisa eliphakathi nonyaka lingaba ngamadijithi ayishumi nesishiyagalombili. Ngokwengxenye yayo, amahora okukhanya kwelanga ngonyaka acishe afinyelele ezinkulungwaneni ezintathu. Ngakho konke lokhu, noma yisiphi isikhathi kuhle ukuthi uvakashele idolobha laseMalaga, yize izinyanga ezinhle kakhulu yilezo ngoJuni nangoSepthemba, lapho izulu lilihle kodwa lingashisi njengangoJulayi noma u-Agasti.
Ongakudla eSan Pedro de Alcántara
I-gastronomy yale ndawo ayihlukile kakhulu kuleyo yonke iCosta del Sol. Njengendawo esogwini, izitsha zayo zisuselwa inhlanzi entsha. Ngokuphathelene nokulungiswa kwayo, kunezitsha ezimbili ezijwayelekile okufanele uzame. Eyokuqala yi- "inhlanzi ethosiwe, ethatha i-anchovy, i-horse mackerel ngisho ne-mullet ebomvu njengempahla eluhlaza. Futhi enye i- isardard skewer, olungiswa ngokuwafaka endukwini nokuwosa emlilweni womlilo.
IGazpacho futhi izitsha zasendaweni, salmorejo futhi ajoblanco. Lesi sakamuva yisobho elibandayo eliqukethe amanzi, uwoyela womnqumo, igalikhi, usawoti, isinkwa kanye nama-alimondi. Kwesinye isikhathi uviniga uphinde wengezwe kuwo futhi uvame ukudliwa ngezingcezu zebhece noma amagilebhisi. Ngokuqondene namaswidi, kufanele uwanambithe amakhekhe kawoyela, ama-borrachuelos kanye nemiqulu yewayini.
Ngakolunye uhlangothi, edolobheni laseMalaga kukhona ifayela le- inani elikhulu lezindawo zokudlela lokho akugcini ngokunikeza wena ukudla kwasendaweni. Unganambitha nokudla kwamazwe omhlaba ngisho nezitsha ezisuselwa ku-gastronomy yesimanje kakhulu.
Ekuphetheni, kuningi iSan Pedro de Alcántara okufanele ikunikeze khona. Akufanele uphuthelwe ithuba lokuvakashela le ndawo enhle eMalaga. Akukho okumele kudambise amanye amadolobha adume kakhulu eCosta del Sol njengeMijas, UNerja, Fuengirola, Benalmádena noma iTorremolinos.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » ISan Pedro de Alcantara
Ukuvakasha kweNiagara Falls kusuka eNew York